Xiriirka Wararka been-abuurka iyo weerarka Wasiir Goodax ku qaaday Puntland – Radio Daljir
Xiriirka Wararka been-abuurka iyo weerarka Wasiir Goodax ku qaaday Puntland
Maajo 18, 2019 11:59 g 0
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdilaahi Goodax Barre oo bishii hore hadal uu sheegay khilaaf xoogan ka dhex dhaliyey wasaarada waxbarashada Puntland iyo wasaaradiisa ayaa markale baasiin ku shubay dabkii gamaaray ee khilaafka labada dhinac kadib markii uu maanta si cad u sheegay inuu fashilmay Imtaxaankii Puntland oo maanta bilowday.
“Imtixaan waa fashilmaa, saacadaan la joogo Puntland imtixaan ay qaadeysay wuu fashilmay,” ayuu yiri Cabdilaahi Goodax Barre oo magaalada Jowhar ku sugan.
Hadalkan ayaa si weyn uga caraysiiyey bulshada reer Puntland oo ay hore xasuusnaa hadalo xanaf leh oo wasiirku sheegay bishii hore xili ay Puntland ka biyo diidey ka qayb qaadashada Imtaxaankii fashilmay ee dawlada Federalkau diyaarisay.
Wasiirka Waxbarashadda iyo Tacliinta Sare ee Puntland, Cabdulaahi Maxamed Xasan, oo u warramay warbaahinta Daljir ayaa beeniyey warka kasoo yeeray wasiir Goodax. wasiirku wuxuu dalbaday in cadayn uu keeno wasiir Goodax oo si aan gabasho lahayn u yiri Imtaxaanka Puntland waa fashilmay.
“Adeer wax kajiraa majiraan Wasiir Goodax isagaa laga rabaa inuu cadeeyo meesha Imtaxaanka Puntland ku fashilmay. Puntland Imtaxaankeedii sidii loogu talagalay buu ku socdaa meel uu ku fashilmay iyo meel dhibaato ka jirto majirto, waa arin keligii ku ah Goodax Barre isagaa laga rabaa inuu cadayn keeno”, ayuu yiri Wasiir Cabdilaahi Maxamed Xasan.
Isagoo hadalkiisa siiwata ayuu sheegay in hadii Wasiir Goodax uu cadayn keeni waayo ay u aqoonsanayaan nin xumaan u qaba shacabka Puntland iyo ardayda reer Puntland. “Maraganayo meel uu wasiirku warka ka keenay isagaa laga rabaa cadayn hadii kale waxaan u qaadanaynaa xumaan iyo nacayb uu Puntland u qabo,” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Wararka been-abuurka ah ee Imtaxaanka Puntland laga sheegay.
Xiiso gaar ah ayuu leeyahay sanadka Imtaxaanka shahaadiga ah ee Puntland kaasoo ay sababtay laba arimood oo kala ah In Puntland diidey ka qaybgalka Imtaxaank Dawlada Federalka ahi diyaarisay oo la duray amaankiisa ka hor intii uusan fashilmin iyo in Isla Imtaxaankii Puntland diidey fashilmay waxayna arintaasi sababtay in dad badan indhaha ku hayaan Imtaxaanka Puntland.
Warbaahinta Muqdisho qaarkeed (Caasimada Online) oo dhalan rogey khudbad Madaxweynaha Puntland ka jeediyey daahfurka Imtaxaanka ayaa qoray inuu fashilmay Imtaxaanka Puntland.
Website Muqdisho ka soo baxa oo ciwaan been ah siiyey warbixin uu ka qoray Imtaxaanka
Wasiir Goodax ayey u badan tahay inuu soo akhriyey websiteyada iyo baraha bulshada ee baahiyey wararka been-abuurka ah (Fake News) sidaasna uu ugu dhiiradey inuu sheego Imtaxaankii Puntland inuu fashilmay.
Halkee laga keenay beenta runta loo ekaysiiyey?
Marwalba oo la sameeyo warar been-abuur ah waxaa loo dhigaa si farsamaysan oo dadka qaar run u qaadan karaan. baraha bulshada iyo website yada been abuurka ka faafiyey Imtaxaanka Puntland waxay adeegsadeen khudbadii Madaxweyne Siciid Cabdilaahi Deni ka jeediyey furitaankii Imtaxaanka.
Madaxweynaha oo ka sheekaynaya taariikhda Imtaxaanka Puntland ee shahaadiga ah ayaa sheegay in mudadii Puntland qaadeysey Imtaxaanka uusan marna fashilmin. isagoo xusay in 4 sano ka hor magaalo kamid ah Puntland Imtaxaanka la boobay balse isla habeenkiiba wasaaradu bedeshey Imtaxaankii gacanta shacabka galay taasoo uu tusaale ugu soo qaadanayey sida wasaarada waxbarashada Puntland ugu diyaarsan tahay qaadista Imtaxaan amaankiisu sugan yahay.
“Waxaan aad ugu mahadcelinayaa Wasaarada waxbarashada Puntland in intii Imtaxaanadda Puntland socdeen aan marna liig iyo Imtaxaan baxay jirin, waxaa la ii sheegay in hal mar magaalo si khasab ah lagu jabsaday Imtaxaanka iyadana markiiba la bedeley Imtaxaanka,”, ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Halka mar ee Madaxweynuhu xusay waa 4 sano ka hor, Intii Imtaxaanadu socdeen oo hadalka Madaxweynaha kujirtaana waa ilaa 2009 oo uu soo bilowday Imtaxaanka Shahaadiga ah ee Puntland oo hal maalin la qaado hal maalina dhamaada.
Arrintan ayaa muujinaysa saamaynta wararka been abuurka ah iyo heerkay gaarsiisan yihiin
Faafinta wararka been abuurka ahi waxay keenaan rabshado iyo xasilooni daro siyaasadeed . kala fogaynta bulshooyinka kala duwan ayay ka qayb qaataan faafinta wararka been abuurka ah. daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaadey in qaarada Afrika tahay mid tahay meelaha ay saamaynta ugu weyn ee dunida ku yeeshaan wararka been abuurka ahi.
wararka been abuurka ee qaaradda Afrika ayaa waxa lagu ogaaday inay keenaan rabshado jinsiyadeed, ayna kala qaybsanaan u keeneen dadka iyagoo sidoo kale horseeda isbeddel dhanka lacagta ah..
Falceliska bulshada ee hadalka Wasiir Goodax.
Boqolaal qof ayaa qoraalo kala duwan soo dhigay baraha bulshada sida Facebook, dadka kasoo jeeda Puntland ee Isticmaala Facebook waxay hadalo naqdin u badan kusoo qoreen ciwaanadooda, hadalo caro ka muuqato, kuwo ka maadsanaya wasiirka iyo qaar layaab ka muuqdo ayay u badan yihiin dadka falceliska ka bixiyey arinta.
Mid kamid ah facelisyada qosolka huwan ee laga qoray hadalka wasiirka
Dadka qaar waxay ka hadleen taariikh hore oo siyaasadeed oo uu leeyahay wasiir Goodax taasoo ay dhaliil huwiyeen waxaa kamid ah Sakariye Isticmaar oo sidan Hoose uga hadlay.
Qaar kamid ah dadka si qosol leh ayay uga hadleen arinta wasiirka
Waxaa aad u badnaa dadka sida carada leh u jawaabay labadan qof ee hoos ay ka muuqato faaladoodu ayaa kamid ah.
Isku soo wada duuboo war been-abuur ah oo loo baahiyey si aan ka fiirsi lahayn ayaa gilgiley geyiga, keenayna kalafogaansho siyaasadeed oo Wasiir Goodax kal hore abuuray.
Maqaalo Kale 310 Wararka 21416
Madaxweynaha Somaliland oo eedeyn u jeediyeey Madaxda DFS (Daawo)